hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit, 4shared နှင့်အခြားသော hosting ဆိုက်တွေက ဖိုင်တွေကို စောင့်စရာမလိုဘဲ ဘယ်လို Download လုပ်ကြမလဲ - .::just for share::.
Home » »Unlabelled » hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit, 4shared နှင့်အခြားသော hosting ဆိုက်တွေက ဖိုင်တွေကို စောင့်စရာမလိုဘဲ ဘယ်လို Download လုပ်ကြမလဲ
အဲ့မှာ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါတယ် . Enter the URL of the file you would like to upload: ဆိုတဲ့အကွက်မှာတော့ မိမိ Download လုပ်မယ့် ဖိုင်ရဲ့ URL address ကိုထည့်ရပါမယ်။ Enter your email address to receiveanotification when the file is uploaded: ဆိုတဲ့အကွက်မှာတော့ မိမိ email လိပ်စာပေါ့. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ I agree to Terms of Service ဆိုတဲ့နေရာလေးကို အမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပေးပြီးတော့ Fetch ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ .
မကြာခင်မှာ မိမိထည့်လိုက်တဲ့ email လိပ်စာထဲကို Download လုပ်ဖို့ link ၀င်လာပါ့မယ် . ၀င်လာမယ့်ပုံစံက
အဲ့လိုဝင်လာမှာပါ . အောက်က http://www.fileflyer.com/view/gNChjBO ဆိုတာ မိမိ Download လုပ်မယ့် Link ပါပဲဗျာ . အဲ့ဒီ့ Link လေးကိုနှိပ်ပြီး Download ကိုသာရွေးပေးလိုက်ပါ .